3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3KOOBAN + KOC6H4 -COOH
potassium hydroxide potassium hydroxide potassium, 4-methoxybenzoic
(digo yara) (digo yara) (dd) (rnn)
3 1 2 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3KOOBAN + KOC6H4 -COOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee KOH (potassium hydroxide) ay kaga falceliso CH3COO-C6H4 -COOH ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa KOH (potassium hydroxide) iyo CH3COOK () iyo KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic)?
Dhacdada KOH ka dib (potassium hydroxide) waxay la falgashaa CH3COO-C6H4 -COOH ()
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga KOC6H4 KOC6H4 -COOH (potassium, 4-methoxybenzoic), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CH3COO-C6H4 CH3COO-C6H4 -COOH, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3KOOBAN + KOC6H4 -COOH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3COO-C6H4 -COOH ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COO-C6H4 -COOH ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COO-C6H4-COOH () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3COOK ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOK ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOK () badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KOC6H4 -COOH ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic) badeecad ahaan?
H2O + KH → H2 + KOH
biyaha Hydrogen-ka; Cusbada hydrogen potassium hydrogen potassium hydroxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + KH → H2 + KOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan KH (Potassium hydride; Hydrogen potassium cusbo)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan KH (Hydrogen Potassium; Hydrogen potassium cusbo)
Kali hydrua là một siêu bazơ còn mạnh hơn cả natri hyđrua. Ma aha in la dejiyo deproton hoá các hợp chất carbonyl nhất định để tạo ra cacc enolates
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + KH → H2 + KOH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta KH (Potassium hydride; Hydrogen potassium salt)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KH (Potassium hydride; Hydrogen potassium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KH (Potassium hydride; Hydrogen potassium salt) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (Potassium hydride, Hydrogen potassium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KOH (Potassium hydride; Hydrogen potassium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KOH (potassium hydroxide) badeecad ahaan?
KP ammonia biyaha potassium hydroxide dioxide manganese ah nitrogen
(lng) (kh) (lng) (lng) (rnn) (kh)
(Tim) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (nau deen) (xoog leh)
2 2 2 2 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2KMnO4 + 2NH3 H 2H2O + 2 KOH + 2MnO2 + N2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee KMnO4 (potassium permanganate) ay kaga falceliso NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo KOH (potassium hydroxide) iyo MnO2 (manganese dioxide) iyo N2 (nitrojiin)?
Dhacdada ka dib KMnO4 (potassium permanganate) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2KMnO4 + 2NH3 H 2H2O + 2 KOH + 2MnO2 + N2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KOH (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KOH (potassium hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee MnO2 (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MnO2 (manganese dioxide) sida badeecad ahaan?
5H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2Mn (OH)4 + 3K2SO4
biyaha KP potassium hydroxide sulfate potassium
(lng) (lng) (lng) (lng) (rnn) (lng)
(xoog leh) (Tim) (xoog leh) (xoog leh) (nâu) (xoog leh)
5 2 3 2 2 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 5H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2 KOH + 2Mn (OH)4 + 3K2SO4
Waa maxay xaalada falcelinta ee H2O (biyaha) waxay kaga falceliyaan KMnO4
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa KOH (potassium hydroxide) iyo Mn (OH) 4 () iyo K2SO4 (potassium sulfate)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan KMnO4 (potassium permanganate) waxay la falgashaa K2SO3 ()
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda K2SO3, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 5H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2 KOH + 2Mn (OH)4 + 3K2SO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta K2SO3 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee K2SO3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2SO3 () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Mn(OH)4 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Mn(OH)4 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Mn(OH)4 () badeecad ahaan?
O2 + 2KH → 2KOH
Oxygen Hydrogen-ka; Cusbada hydrogen potassium potassium hydroxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta O2 + 2KH → 2KOH
Waa maxay xaaladda falcelinta O2 (oxygen) ee KH (Potassium hydride; Hydrogen potassium cusbo)?
Heerkulka: > 200
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa KH (Hydrojium Potassium; Hydrogen potassium cusbo)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda KH (Potassium hydride; Hydrogen potassium salt), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada O2 + 2KH → 2KOH